Radio Daljir/UNDEF: Shir-sannadeedka Barnaamijka ARDAA – Radio Daljir
Radio Daljir/UNDEF: Shir-sannadeedka Barnaamijka ARDAA
Abriil 14, 2017 2:13 b 0
Garoowe, Hotel Rayaan Park – Radio Daljir ayaa maanta oo Khamiis ah, 13 Abriil 2017, qabtay shir sannadeedkii barnaamijka taxanaha ah ee ARDAA. ARDAA wuxuu biloowday bilawgii sannadkii hore ee 2016. Shir-sanadeedku wuxuu ahaa shirweyne dhawr waji ka koobnaa, laguna soo bandhigay macluumaad dhinacyo badan ah oo la xiriira guulaha ARDAA ee sannadkii 2016 iyo biloowga sannadkaan 2017.
Shirka ayaa si durugsan looga xog-warramay waxqabadkii Barnaamijka ARDAA ee muddadii sannadka ahayd ee uu socday, meelaha uu tagey, shirarka iyo tababarrada uu qabtay, siiba horumarka iyo hiigsiga haweenka, guulaha la gaaray iyo kaalimaha firfircoon ee barnaamijka, hawl-wadeenada barnaamijka, iyo bulshada garabka u ah barnaamijka ARDAA ay ka ciyaareen doorsiinta haweenka, iyo dadaalkooda ku biiritaan ama ku badasho ee siyaasadda iyo saami-ka-helkeeda.
Barnaamijka ARDAA waxaanu si ballaaran uga hadalnaa arrimo ay ka midyihiin xuquuqda dumarka iyo horumarkooda, dawlad wanaagga, dimuqraadiyadda, doonsiinta xuquuqda haweenka iyo middooda siyaasadeedba. Waxaa shir-sannadadeedkiisaan maanta loogu dabaaldegayey gu’ jirsiga, waxaa sidoo kale looga hadlay qorshaha waxqab ee soo aaddan, kuna abbaaran haraaga sannadkaan 2017, iyadoo la isla gartay sannadkaan in xoogga lagu saaro arrimaha dimuqraadiyaynta Puntland iyo door-ku-yeelashada xagga haweenka.
Shirkaan maanta uu qabtay Radio Daljir, ahaana shir sannadeedkii Barnaamijka ARDAA waxaa uu ka dhacay Hotelka Rayaan Park ee magaalada Garowe, waxaana ka qaybgalay dadka gaaraya 50 ruux, kuwaasi oo in ka badan 30 ay ahaayeen haween kala matalayey wasaaradda hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland, urur weynaha haweenka Puntland, ururada haweenka ee gobollada iyo degmooyinka ee Puntland iyo wakiillo isla haweenka ah oo iyana ka socday jaaliyado dibadeed iyo bulshada rayidka ahba.
Waxaa kaloo shirka ka qaybgalay xubno matalayey guddiga KMG ah ee doorashooyinka axsaabta badan ee Puntland, kuwaasi oo uu ka mid ahaa guddoomiye kuxigeenka guddigaasi doorashada Puntland Maxamuud Xasan Soofe, ahna kusimaha guddoomiyaha, wakiilo ka socday hay’adda Astaynta iyo maamul wanaagga ee Puntland, iyo masuuliyiin kale oo bulshada rayidka ah.
Ka qaybgalayaasha shir sannadeedka ARDAA, ayaa badankoodu tilmaamay in ay ka mid yihiin dadka sida dhaw ula socda Barnaamijyada ARDAA, kuna taxan dhegaysiga barnaamijka, iyaga oo bahda ARDAA iyo maamulka iyo shaqaalah Radio Daljir na uga mahadceliyey soogudbinta barnaamijka ARDAA oo ay tilmaameen in uu yahay mid xambaarsan macluumaad badan oo ka turjumaya waaqiciga dadka iyo deegaannada Puntland iyo Soomaaliya inteeda kaleba.
Sidoo kale ka qaybgalayaashu waxay talabixinno waafi ah la wadaageen guddiga KMG ah ee doorashooyinka dawladaha hoose ee Puntland, talooyinkaasi oo iftiiminayey hannaanka ugu wanaagsan ee looga miro-dhalin karo nidaamka axsaabta ee Puntland.
Masawirada shirka hoos ka daalaco
ARDAA 112 Siyaasadda & Dhaqaalaha 478
Gudiyada Joogtada ah ee Barlamaanka DFS oo Gudoomiyayaal Doortay (DHEGAYSO)